Ny valanaretina dia nanova tanteraka ny fomba fizotry ny vahoaka meksikana. Na izy ireo aza dia tsy tia miantsena an-tserasera, na izany aza, rehefa nakatona ireo fivarotana dia manomboka manandrana sy mankafy miantsena an-tserasera sy fandefasana an-trano ny Meksikana. Talohan'ny fanidiana lehibe noho ny COVID-19, ny tantely e-varotra tany Mexico dia ...
Tamin'ny 22 Janoary, ny Minisitry ny Minisiteran'ny varotra dia niresaka momba ny fivoaran'ny tsenan'ny antsinjarany amin'ny taona 2020, tamin'ny filazany fa tamin'ny taon-dasa, ny fampiroboroboana ny tsenan'ny antsinjarany an-tserasera dia nampiseho fironana tsara, ary ny haben'ny tsena dia nahatratra avaratry vaovao iray manontolo haavo. Tamin'ny taona 2020 manontolo, ny f ...
Araka ny tranokalan'ny General Administration of Customs dia mitombo haingana ny e-commerce cross-border. Tamin'ny taona 2020, lisitra fanafarana sy fanondranana 2,45 miliara no nankatoavina tamin'ny alàlan'ny sehatra fitantanana ny e-varotra miampita sisintany miaraka amin'ny fitomboana 63,3% isan-taona raha ampitahaina amin'ny taona ...
Tamin'ny 16:00, 20/11/2020, i Wu Quandong, filohan'ny Nongchuanggang Cross Border E-Commerce (Weifang) Co. Ltd, VP Ma Yuyou, dia nitarika ny ekipa hitsidika sy hanatrika fiaraha-miombon'antoka fiaraha-miasa ao East Asia Livestock Exchange Ltd Ny tena atiny amin'ity fivoriana ity dia ny famakafakana ny resaka China Nongchuanggang cro ...
Tamin'ny 21 Janoary, nisy vondrona mpivarotra fanafarana sakafo any Korea Atsimo tonga tao NCG noho ny fantsona eo an-toerana ary niresaka momba ny kalitaon'ny vokatra, ny fenitra fanondranana, ny baiko ary ny fandefasana. Ireo mpivarotra Koreana Tatsimo dia nandalo sehatra e-varotra NCG tsy miankina niampita tamin'ny kalitao avo lenta ...